Daraasad Cusub oo Shegeyso Raga Kunool Dalka India Dhibaatada ey Ku Qabaan Cinjirka Isticmalkisa: Wu Naga Wen Yahay. - iftineducation.com
Daraasad Cusub oo Shegeyso Raga Kunool Dalka India Dhibaatada ey Ku Qabaan Cinjirka Isticmalkisa: Wu Naga Wen Yahay.
iftineducation.com – Sahan lagu sameye in ka badan 1000-rag ee Wadanka India aya soo sartey cinjirka caalamiga ah inu aad uga ween yahay inta badan raga kunool wadankasi, BBC aya sidasi qortey.
Warbixintan aya sheegeyso boqolkiba konton raga deeganka ah inu aad ugu wen yahay cinjirka midasi aya keeneyso dhibaato isticmalkisa.
Sahankan aya socdey mudo labo sano ah waxaana soo abaabuley Indian Council Of Medical Research. In kabadan 1,200 rag ah aya sixur ah uga qeeb galen waxaana lacabirey xubintoda. Cabirka lasameeye aya sheegaya in Raga wadajir marki la eego 60% ey 3-sentimitir Ila 5-sentimitir xubintoda ay kayartahay cinjirka.
Digtoor Chander Puri oo qibrad uleh dhalmada aya BBC da usheegey iney cadahay raga wadanka joga iney baahi uqaban cinjir cabirkoda LA eg. Waxu hadalkisa kudarey baahida loo qabo cinjir Ku imaanayo cabir walbo iney kajirto dalka India. Arintani aya halis ah mado halkiba Shanta qof oo isticmasho cinjirka aya kadhaco amaba jeexmo. Waa qasaro aad uwen.
Wadanka India aya kamid ah wadamada ugu badan oo kunol dadka cudurka HIV-ga qabaan
Warbixintan aya keentey raga kunool wadankasi iney kaxishodan iibsashada cinjirka. Digtoor Puri aya kubooriye raga ” muhiimada ma ahan cabirka, muhimada aya ah waxa adku qabaneysid. Aragtida shacabka aadka ubadan ee kunool wadankani aya tusaale ah in shaqada sariirta ey kufiican yihin raga India.”
Shirkadaha soo saro cinjirka aya goordhow la filaya in dhibaatada heysato raga India xal uhelaan.
Director Mohit Sur Ayaa Dhahaya Doorka Shraddha Kapoor Ee Filimka Half Girlfriend Waa Door Soojiidasho Leh!!